MD Dr. Aadan Yuusuf Abokor: Hoggaamiye bulsho oo ku dayasho mudan • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Kooxda UFO waxa lagu xidhay jeelkii Labaatan-Jirow oo ku yaallay geerigo’an cidla ah, oo Gobolka Baay ah. Jeelkaas oo uu Jarmalka Bari u
dhisey dawladdii milleteriga ahayd, waxa uu ahaa meel ciqaab ifka ah loogu talo galay, jidh iyo maskax dilna u samaysan. Waxa jeelkaa soo maray dadka u xidhan siyaasadda iyo iscabbirka fikirkooda oo aanu kolkaa milleterigu midna raalli ka ahayn. Qof waliba waxa uu ku jiray qol yar oo 2x2m ah, oo aanu weligii xidhiidh aragti ah, iyo mid hadal ah toona, la lahayn kan kale ee godka ku xiga ku jira. Xilligaa adag ayuu Yuusuf Gaydh oo ka mid ahaa kooxda xidhxidhani sameeyey sanqadh gidaar garaac ah, oo sida dhiidhaada ah, oo ay sir ahaan ku xidhiidhaan, warkana isku waydaarsadaan.